Daawo Sawirrada: Tababar ku saabsan khatarta Miinooyinka oo loo qabtay booliiska Soomaaliya iyo AMISOM – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: Tababar ku saabsan khatarta Miinooyinka oo loo qabtay booliiska Soomaaliya iyo AMISOM
Ku-xigeenka Taliyaha AMISOM ee u qaabilsan taakulada iyo saadka Sarreeye Gaas Nakibus Lakara ayaa codsaday in laga taageero sidii looga hortegi lahaa halista miinooyinka ay isticmaalaan kooxda Al-Shabaab.
Hadalkaan ayuu ka jeediyay Nakibus Lakara xeritaanka tababar Askarta AMISOM iyo Boliska Somalia looga wacyi gelinayey Khataraha Miinooyinka IEDs iyo qaababka looga horetgi karo.
Tababaarkaasi oo socday muddo seddax maalin waxaa maalgeliyey kooxda taageeradda hawlgalka booqrtooyada Britain ee loo yaqaano UK MST.
Sarreeye Gaas Nakibus Lakara waxa uu tilmaamay inay Al-shabaab aad u isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso ee IEDs isla markaana ay samaysanayaan Miinooyin waa weyn oo qaarkood uu culayskoodu ka badan yahay 80 KG.
Waxa uu ku baaqay in la xoojiyo Hawlaha Sirddoonka ee u dheeeya AMISO iyo dhinacyada kale si looga guuleysto dhibaatooyinka ka dhalan kara Miinooyinkaas waa sida uu hadalka u yiri.
Ciiddanka Hawlgalka AMISOM waxay had iyo jeer Alshabaab kala kulmaan Qaraxyadda Miinooyinka ee ay ku aasaan hareeraha Waddooyinka ay Ciiddanka AMISOM sida joogtadda ah u isticmaalaan gaar ahaan Waddooyinka ku yaalla duleedka Magaalladda Muqdisho.
Kulan lagu sagootinayey howl-wadeeno kamid ah shaqaalaha hey’adda Bisha Cas ee Turkiga oo lagu qabtay Muqdisho
Dhageyso Warka Subax Ee Radio Muqdisho 4-9-2016